Guudmarka MHH - Ku Saabsan - Ningbo MH
Ningbo MH Industry waxaa lagu aasaasay 1999, oo ku takhasusay qalabka garoomada iyo qalabka wax lagu dhejiyo. Ka dib sanado badan oo horumar ah, MH ayaa aasaasay xiriir ganacsi oo ka badan wadamada 150, Shirkadda Mh waxaa loo tixgeliyaa "Shirkadda Top 500 Shirkadda Adeega Shirkadda" iyo "AAA Trustworthy Company", iyo "MH" saameyn weyn ayuu ku leeyahay suuqa gudaha iyo dibedda .
Marka la eego horumarka sanadaha 16, hadda MH waxa ay ka sareysaa shaqaalaha 3,500, 5 xarumo waaweyn oo wax soo saarka (wadarta 382000m2), oo soo saara awoodda illaa 1500tons / bisha thread tolidda, 200tons / bishii thread daabac, iyo 700,000y / bishii xargaha dhar. MH sidoo kale waxay samaysay iskaashi muddo dheer ah oo leh in ka badan shirkadaha 1500 wax ka badan 1000 nooc ka duwan alaabta dhuxusha.
Hadda MH waxay leedahay xafiisyada 40 ee ku yaala waddan kala duwan, si ay macaamiisha u siiyaan jawaab deg deg ah oo adeegga degaanka ah, oo weliba leh ERP, MH APP iyo hababka kale ee IT, MH waxay siin kartaa adeegga shakhsi ahaaneed shakhsi ahaan meel kasta. Maqnaansho sida macmiilka ula xiriiro MH, E-mail, fakis, taleefanka, APP IM ama waji-wejiga, macaamilku wuxuu mar walba heli karaa adeeg hufan, degdeg ah iyo adeeg xirfadeed.
MH waxay samayn doontaa dadaal joogto ah si loo abuuro boqortooyo wax soo saarka, si ay macaamiisha u siiso qandaraas buuxa, sicir macquul ah, bixinta wakhtigeeda, qalabka tayada habboon ee tayo leh.
Guudmarka MH Home Categories - Caqabado - Zippers - Ribbon & Tape - Raashin - Meelo - Buttons - Macmiilka - Tassel & Fringe / Qalabaynta - Qalabaynta Qalabka - Gawaarida & Gargaarka - Mashiinka & Qeybaha - Faaruq - Qaar kale Nagu saabsan - MHM Overview - MH Industrial - History History - Sheega Tilmaamaha - Wakiiladayada --Image Galleries - Albaabada Albaabka Nala soo xiriir - Joogitaanka Goobta - Dib u noqoshada Community - La soco - Codsiga --Nagu soo biir